USuku lweeNcwadi lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe | Uncwadi lwangoku
ULidia Aguilera | | I zi ganeko, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
Namhlanje, umhla we-2 ku-Epreli, luSuku lweeNcwadi lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe, nobelubhiyozelwa kwihlabathi jikelele ukusukela ngo-1967 ekhethwe njengerhafu kumbhali uHans Christian Andersen, ekhetha usuku lokuzalwa kwakhe. UAndersen ngumbhali waseDenmark odumileyo ngamabali abantwana bakhe, kubandakanya iDuckling eDuckling kunye neNcinci yeMermaid, omabini la mabali aguqulelwe kwiscreen esikhulu nguDisney. Olu suku lubhiyozelwa ukuze kukhuthazwe uthando lweencwadi kwaye kutsale umdla woluntu kwiincwadi zabantwana.
Qho ngonyaka, ilizwe linethuba lokuba ngumxhasi woSuku lweeNcwadi lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe. Ilizwe elikhethiweyo liphethe ukukhetha umxholo kwaye limema umbhali ovela elizweni ukuba abhale umyalezo wabantwana abavela kwihlabathi liphela kunye nomzobi ukuze benze uyilo. Umzekeliso kunye nomyalezo uyasetyenziswa, namhlanje nangomhla, ukukhuthaza iincwadi kunye nokufunda. Kulo nyaka, ilizwe elijongene nokulungiselela umsitho yiBrazil, nangona onke amazwe ehlanganisene ukubamba imisitho eyahlukeneyo ukuze kukhuthazwe ukufunda kwabona bancinci. Le mibhiyozo idityaniswa yiminyhadala eyahlukeneyo enje ngeentlanganiso nababhali kunye nemifanekiso, ukhuphiswano okanye amabhaso eencwadi esele zipapashiwe.
Uncwadi lwabantwana ngu yenye yezona zinto zibalulekileyo ezisebenzisanayo nophuhliso lwabancinci. Kukule minyaka apho kuya kufuneka uqale ukhuthaze uthando loncwadi yiyo loo nto uncwadi lwabantwana luthathelwa ingqalelo eyona nto iphambili ekufundeni, kuba iyanceda ukuba umntu akhule njengomntu, iyasifundisa kwaye yandise iihorizons zethu kunye nokuyila kwethu. Enkosi kuncwadi lwabantwana abancinci wandise umnqweno wakho wolwazi kunye nokwenziwa kwezinto ezintsha, nto leyo eya kuthetha ikamva nethemba.
Kungenxa yesi sizathu ukuba ixabiso loncwadi lwabantwana akufuneki lonakaliswe. Abantu abadala abaninzi abasayi kuyonwabela kakhulu xa bekhangela izicatshulwa ezintsonkothileyo kunye nezizaliswe lulwazi, ezinokuthi zibe yinto eqhelekileyo kuba, njengoko benditshilo ngaphambili, uncwadi luyayandisa iminqweno yethu yolwazi kwaye sandisa ubunzima kunye nokuzama ezinye iintlobo zolwazi. Uncwadi ukuze sandise iihorizons zethu kwaye sibe ngabantu abalumkileyo. Nangona kunjalo, uncwadi lwabantwana luqhakamshelwano lokuqala olufanelekileyo lwabantwana, babafundisa ukufumana umhlaba omtsha. Kukulencwadi yamaphupha, eneentsomi ezineenkwenkwezi zezilwanyana kunye namawaka eenguqulelo zamabali akudala ahamba kunye nokuziphatha kwawo, apho abantwana bafumanisa umlingo nokubaluleka koncwadi.
Kwakhona ngo-Epreli 2 Bakwalwela nelungelo lokufikelela kuncwadi lwabo bonke abantwana. Ngenxa yenani elikhulu leengxaki kunye neembacu, ukongeza kwiingxaki ezikhoyo kwihlabathi lesithathu, ilungelo lokufunda kunye nenkcubeko lisikelwe umda kwezinye iindawo, kwaye yeyabo namhlanje, Usuku lweNcwadi lwaMazwe ngaMazwe aBantwana, kufuneka silwele nelungelo ekufuneka sonke sinalo kuncwadi, umthombo wolwazi kunye nobuchule bokuyila.
Ukusuka eSpain kwenziwa imisebenzi eyahlukeneyo ngolu suku lukhethekileyo. Kwiwebhusayithi ye "Umbutho waseSpain weencwadi zabantwana nolutsha”, Isifinyezo seOepli, Unokufumana ukuba yeyiphi imisebenzi eyenziwayo kufutshane nezindlu zakho. Ungathandabuzi ukungena kwaye ukhethe uluntu lwakho oluzimeleyo (kamva lubonakala lwahlulwe zizixeko) ukuze wazi ukuba zeziphi iziganeko ezicwangciselwe namhlanje.
Okokugqibela, ndiyaphinda ndigxininise ukuba akufuneki silibale ukubaluleka koncwadi lwabantwana, kuba kulapho luqala khona uhambo ngoncwadi, apho abantwana bafunda amaxabiso abaluleke njengothando, intlonipho, ubuhlobo, ukuthembeka, intsebenziswano, ukuthembana ... Kwiincwadi zabantwana sinokufumana umthombo omkhulu wobulumko onokuthi umangalise oyena mdala. Usebenzisa umzekelo, ngokuqinisekileyo uninzi lwenu lufundile INkosana encinci Xa wawusemncinci kwaye, njengoko ukhula kwaye uyifunda kwakhona, ufumene izinto ezininzi ezothusayo ezakhe zangaziwa. Ngamanye amaxesha uncwadi lwabantwana lufihla ngaphezulu kunoko kudibana neliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » I zi ganeko » Usuku lweNcwadi lwaBantwana lwaMazwe ngaMazwe
Iindlela ezi-6 zokufumana inkuthazo
Ukhuphiswano lweencwadi lukazwelonke lwenyanga ka-Epreli